From South Africa, President Thabo Mbeki and Foreign Minister Nkosazana Dlamini Zuma were expected to attend a session late Wednesday of SADC’s committee on politics, defense and security that officials said would take up political conditions in Zimbabwe, the Democratic Republic of Congo and Lesotho.
Zambia is assuming SADC’s rotating leadership – significant because President Levy Mwanawasa broke ranks with his African peers in March when he likened Zimbabwe to a "sinking Titanic," saying South Africa's “quiet diplomacy” had been ineffective.
Among Zimbabwean activists offering an overview on the situation were Arnold Tsunga, executive director of the Zimbabwe Lawyers for Human Rights, Lovemore Matombo, president of the Zimbabwe Congress for Trade Unions, Lovemore Madhuku, chairman of the National Constitutional Assembly and Netsai Mushonga, who was representing a coalition of Zimbabwean women’s groups.
Some 40 Zimbabwean activists never made it to Lusaka because they were barred from entering Zambia at the Chirundu border post. Zambian authorities suspected the Zimbabweans intended to stage a protest at the summit when they found T-shirts with the slogan “Save Zimbabwe” in the bus that was transporting the activists.